So I Married An Anti-Fan – Gold Channel Movies
Apr. 30, 2021 iQiyiViki
Episode 13 Jun. 11, 2021
Episode 14 Jun. 12, 2021
Episode 16 Jun. 19, 2021
So I Married an Anti-Fan 2021(그래서 나는 안티팬과 결혼했다)
ဒီတစ်ခါတော့ GC ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အချစ်ဟာသကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
Hoo-Joon (Choi Tae-Joon) နာမည်ကြီး ထိပ်တန်း idol အဆိုတော်ပါ။ အေးစက်စက်အပြင်ပုံနဲ့ မတူတဲ့ နူးညံ့တဲ့စိတ်သဘောထားရှိသူပါ။ Geun-Young (Sooyoung) ကတော့ သွက်လက်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းသတင်းထောက်တစ်ဦးပါ။ မဂ္ဂဇင်းမှာ သတင်းထည့်နိုင်ဖို့အတွက် Geun-Young တစ်ယောက် ဖွင့်ပွဲတစ်ခုကို လာတက်ရာမှ Hoo-Joon ရဲ့အပြုအမူတွေကို မနှစ်သက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် သူက Hoo-Joon အပေါ် မတော်တဆအန်မိလိုက်ပါသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ Geun-Young တစ်ယောက် သူအလုပ်ပြုတ်တဲ့အခါမှာတော့ Hoo-Joon ရဲ့လက်ချက်လို့ ယူဆပြီး နေ့စဉ်ရက်ဆက် Idol ရဲ့အေဂျင်စီရှေ့မှာ anti-fan အနေနဲ့ ဆန္ဒသွားပြပါတော့တယ်။ Anti-fan အနေနဲ့ လည်း မီဒီယာတွေမှာ အကြီးအကျယ် ဖော်ပြခြင်းခံလာရပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုရဲ့ ပီဒီကဆက်သွယ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Top star နဲ့ သူရဲ့ anti-fan တို့ အတူတကွနေထိုင်ပြီး ကြုံတွေ့ရတာတွေကိုတင်ဆက်မယ့် TV show ပါ။ အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို Geun-Young ကလည်း သူမရဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် လက်ခံလိုက်သလို Hoo-Joon ကလည်း သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ လက်ခံမိပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ အပြင်ဘဝမှာ တကယ်မတည့်တဲ့သူနှစ်ယောက် TV မှာ ပြန်လည်တွေ့ဆုံပြီး ဘယ်လိုအလွဲတွေကြုံရမလဲ၊ ဘယ်လိုမျိုး သံယောဇဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာကြမလဲ ဆိုတာကို အပတ်စဉ် သောကြာနဲ့စနေတွေမှာ GC Drama မှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦး။
UlysseshtutMay 29, 2021Reply
DaraMay 29, 2021Reply
Victor KhaiMay 28, 2021Reply
အပိုင်း၉ အပိုင်း ၉…..
Victor KhaiMay 16, 2021Reply
MemoMay 15, 2021Reply
Ep6😍
MemoMay 14, 2021Reply
Ep5မတင်တော့ဘူးလား